OnePlus, Oppo နဲ့ Vivo တို့ကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲက ပိုင်တာ သင်သိပါသလား ? – DigitalTimes
စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့ OnePlus , Oppo နဲ့ Vivo တို့ဟာ တရုတ် ကုမ္ပဏီကြီး BBK Electronics ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲများဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား ? BBK ဟာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ သက်တမ်းရှိတဲ့ Consumer Electronics များထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး အစောပိုင်းမှာ Nintendo Entertainment System များကို တုပ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
BBK က Vivo နဲ့ Oppo တို့ကို ပိုင်ပြီး OnePlus ဟာ Oppo ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးရဲ့ မိခင် ကုမ္ပဏီဟာ BBK ဖြစ်ပါတယ်။ BBK ဟာ ဂိမ်းစက်များ၊ ကစားစရာများကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိပါတယ်။ သူ့မှာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်နဲ့ ၁၀ ဟက်တာကျော် ကျယ်ဝန်းတဲ့ မြေပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ စက်ရုံများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ သူဟာ Learning Machine , Language Repeater , Electronic Dictionary , Reading Machine တို့လို ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စက်ကိရိယာများကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ Oppo Brand ကနေလည်း Home Cinema ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Oppo ဟာ DVD, Blu-Ray , Audio Player များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာ ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကျမှသာ စမတ်ဖုန်ုးနယ်ပယ်ထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Oppo ဟာ ငါးနှစ်အတွင်းမှာ တရုတ်ရဲ့ ဒုတိယ အမြတ်ငွေ အများဆုံး ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်လာပြီး တရုတ်ရဲ့ ထိပ်တန်း စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့ Huawei , ZTE, Lenovo , Xiaomi တို့နဲ့ ရင်ဘောင်တန်းလာပါတယ်။
Vivo ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ ဖုန်းများ စတင် ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Vivo ဟာ နည်းပညာမြင့် Hi-Fi Chips များ၊ အရည်အသွေးမြင့် စကရင်များ၊ Customize လုပ်နိုင်တဲ့ Android အခြေပြု Funtouch OS များပါတဲ့ စွမ်းရည်ကောင်းတဲ့ ဟန်းဆက်များကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ Vivo က ရှန်ဇန်ပြည်နယ်မှာ Audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းတစ်ခု ဖွင့်ထားပြီး မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှာ အရည်အသွေး မြင့်မားတဲ့ အသံ နည်းပညာများ ထည့်သွင်းဖို့ သုတေသနများ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဟန်းဆက်များဟာ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး တရုတ်မှာတော့ တန်ဖိုးကြီး တန်းဝင်ပါတယ်။ Vivo ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဖုန်း ၄၅ သန်းကျော်ရောင်းချရပြီး ရောင်းအားဟာ ၁၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တိုးတက်လာပါတယ်။
OnePlus ကတော့ ဖုန်းမော်ဒယ်အနည်းငယ်ကိုသာ ရောင်းချလေ့ရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားပေမယ့် တန်ဖိုးချိုသာတဲ့ ဖုန်းများကြောင့် သူဟာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ Oppo ရဲ့ ဝန်ထမ်းဟောင်း Pete Lau နဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း Carl Pei တို့ ပူးပေါင်း တည်ထောင်ထားတာပါ။ ကုမ္ပဏီဟာ ဖုန်းနယ်ပယ်ထဲကို ဝင်ရောက်တာ ငါးနှစ်လောက်သာ ရှိသေးပေမယ့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ကျော် ဝင်ငွေရခဲ့ပါတယ်။
Tags: OnePlus, oppo, Vivo
ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံး1TB USB-C stick ကို SanDisk မှ မိတ်ဆက်
Android မှာ မိုဘိုင်းဒေတာနဲ့ ဘက်ထရီ စားသုံးမှု သက်သာအောင် Manual Refresh ပြုလုပ်နည်း